ထောက်ပံ့ရေး Exposed Urinal Flush Valve, Concealed Urinal Flush Valve, China Supplier မှ Automatic Urinal Flush Valve
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ထိတွေ့ဆီး Flush Valve,ဖုံးကွယ် urinal flush Valve,Automatic Urinal Flush Valve,urinal ဖလပ်စနစ်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Flush Valve > Urinal Flush Valve
Urinal Flush Valve ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ထိတွေ့ဆီး Flush Valve, ဖုံးကွယ် urinal flush Valve ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Automatic Urinal Flush Valve R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Adjustable Water Flow နှင့်အတူ Urinal Flush Valve
ကြေးဝါ chrome ကိုချပ် push button ကိုဆီး flush အဆို့ရှင်
လက်နှိပ်စက်အမျိုးအစား Adjustable Urinal Flush Valve
Urinal Flush Valve သည်နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသည်
WC Urinal Flushometer လက်ထိန်းချုပ်ခြင်းဖလပ်шер
Urinal အတွက်နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော Self-Closing Flush Valve
Urinal Flushing Valve Toilet Flush Valve ကိုနှိပ်ပါ
Button ကို Urinal Flush Valve ကိုနှိပ်ပါ
Adjustable နှင့်အတူဖုံးကွယ် Push-Button ကို Urinal Flush Valve
ကြေးဝါခလုတ်ကို Urinal Flush Valve
ရေချွေတာတဲ့အခာ urinal flush အဆို့ရှင်
Public Urinal Toilet အတွက် Urinal Flush Valve
အမျိုးသားများအတွက် Urinal Flush Valve ကိုလက်ဖြင့်ဖိပါ
နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသော urinal flush အဆို့ရှင်သည်လက်ဖြင့်ဖိအားပေးသည်
အချိန်နှောင့်နှေးကြေးဝါ Urinal Valve
Urinal အတွက်စီးပွားဖြစ် Flushometer Valve
Urinal Flush Valve ကိုနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော Push Button
Adjustable Water Flow နှင့်အတူ Urinal Flush Valve အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးလည်ပတ်နိုင်အောင်ထိန်းထားနိုင်သောရေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူနံရံ ပေါ်ရှိထိတွေ့ထားသောဆီး flush အဆို့ရှင် ။ ၎င်းသည်အချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန် flush အဆို့ရှင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေရရှိရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ၃ မှ ၈ စက္ကန့်ကို flushing၊ အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သည်။ ၈...
ထိတွေ့ဆီး flush Valve6မှ 8 စက္ကန့်, အလိုအလျှောက်ပိတ် flushing, ရေရဖို့တစ်ဦးနှောင့်နှေး Self-ပိတ်ပြီး flush အဆို့ရှင်၏အမျိုးအစား, စာနယ်ဇင်းခလုတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Urinal Flushing System ကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Wall Hung Manual Flush Valve သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ Ridge Flush...
Urinal Flush Valv သည် HN-7G07 ၏ကြီးမားသောနွေ ဦး ကြေးဝါအဆို့ရှင်အမာခံဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းသက်တမ်းသည်ကြာရှည်။ လုံခြုံပြီးကျန်းမာပါသည်။ မြင့်မားသောနည်းပညာဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းအိမ်သာအတွက်အဓိကကြေးဝါထည် flush valve သည်ရေချွေတာရန်၊ ချိန်ညှိနိုင်သောရေစီးဆင်းမှုအရွယ်အစား၊ ၄ မှတ်ပါ ၀ င်သော ၀ င်ပေါက်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အမျိုးသားအဆင့်...
HN-7G07B ၏ Urinal Flush Valve သည်ကြီးမားသောနွေ ဦး ကြေးဝါအဆို့ရှင်အမြောက်အများပါ ၀ င်ပြီးအဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောခလုတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လုပ်ငန်းသက်တမ်းသည်ကြာရှည်။ လုံခြုံပြီးကျန်းမာပါသည်။ မြင့်မားသောနည်းပညာဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းအိမ်သာအတွက်အဓိကကြေးဝါထည် flush valve သည်ရေချွေတာရန်၊...
အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း Urinal Flush Valve ကို 3-8 စက္ကန့်ခန့်အလိုလိုပိတ်ပါ ။ Public Toilet Flush Valves များသည်ကြေးဝါကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကိုပိုလန်သည်တောက်ပ။ ကြာရှည်စွာချေးနိုင်သည်။ Exposed Urinal Flush Valve သည် အာမခံ ၅ နှစ်ဖြစ်သည်။ switch ကိုတပ်ဆင်။...
Urinal Flush Valve သည်အများသုံးအိမ်သာ flush အဆို့ရှင်ဖြစ်ပြီးကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ခရုမ်း plated ။ အဘို့အဆင်းနှိပ်ပါ Urinal Flushing System Water၊ အချိန် ၃ မှ ၈ စက္ကန့်နောက်ကျပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုပိတ်ပါ။ ဆာလောင်မှု အတွက် အိမ်သာ Flush Valve အများသုံးသန့်စင်ခန်းများ၊ ဘူတာများ၊ Water Closet Flush Valve သည်လွယ်ကူ။...
Urinal Flushing System ကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေကိုဖိ။ အချိန် ၃ မှ ၈ စက္ကန့်နောက်ကျပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။ Exposed Urinal Flush Valve သည်အများသုံးရေချိုးခန်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော Urinal ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသည်။ Flush Valve အိမ်သာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ အလုပ်လုပ်ဖိအား...
Urinal flush အဆို့ရှင် ကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေကိုဖိ။ အချိန် ၃ မှ ၈ စက္ကန့်နောက်ကျပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။ Urinal flush အဆို့ရှင်သည် များသောအားဖြင့်အများသုံးရေချိုးခန်းတွင်ချိတ်ဆွဲထားသော Urinal ကိုအသုံးပြုသည်။ Exposed type flush valve...
ကို C ချိန်ညှိနှင့်အတူ Push ကို-Button ကိုဆီး flush Valve oncealed Handy's Concealed Manual Urinal Flush Valve ဆီးခုံနံရံပေါ်မှာတ ဦး တည်းတွန်းအားပေးခလုတ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ Push-Button Urinal Flush Valve ၏ထွက်ရှိအ ဆို့ရှင်ကိုယ်ထည် နှင့် flush အဆို့ရှင်၏ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ပိုက်များအားလုံးမမြင်ရပါ။...
Handy ၏ Button-type Urinal Flush Valve အဓိကကိုယ်ထည်နှင့်အဆို့ရှင်အမာခံများသည်ကြေးဝါ၊ ထူမြေထုဆွဲအား၊ တိကျမှန်ကန်သောစက်နှင့်တာရှည်ခံသက်တမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Button Delay Urinal Flush Valve ကိုအလှဆင်တဲ့အဖုံး၊ စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်တဲ့အဆို့ရှင်၊ သံမဏိရေပိုက်၊ Brass Button Urinal Flush Valve...
ရေချွေတာ သော Handy ၏ urinal flush အဆို့ရှင် သည်ရေစီးနှုန်းကိုထိန်းညှိရန်အတွက်စင်ကြယ်သောကြေးနီအဆို့ရှင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ ရေထွက်ပေါက်အကွာအဝေးသည် ၃-၈ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ Push-button အမျိုးအစားဆီး flush အဆို့ရှင် သည်အခြားအလားတူထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။...
အများပြည်သူအတွက်နံရံချိတ်ထားသောနံရံပေါ်တွင်တပ်ထားသော urinal flush အဆို့ရှင်အတွက် urinal flush အဆို့ရှင်။ အချို့သော use.water sainer urinal toilet manual Flush Valve၊ 's' ပြွန်နှင့်ကြီးမားသောအဆို့ရှင်သောကြေးဝါခလုတ်ခရုမ်းအပြီးသတ်၊ နည်းပညာ မြင့်သော ကြေးဝါသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ရေနှင့် G1 / 2...
အမျိုးသားများအတွက်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသော Urinal Flush Valve ။ အရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါ ဖြင့်ပြည်သူ့အိမ်သာသန့်စင်ခန်း ၊ အဆင့်မြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆွဲငင်အားပုံခြင်း၊ တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် သဘာဝကိုယ်နှိုက်ကခိုင်မာပြီးတာရှည်ခံသည်။ ထိတွေ့ဆီး Flush Valve ကို 1/8 "ဝင်ပေါက်...
Handy ၏ နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသော Urinal flush အဆို့ရှင် သည် single-hole Ming-Mount ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Push-type ၏နောက်ကျသောရေ၊ ကြေးနီနောက်ကျအဆို့ရှင်၊ ရေထွက်ရန်နှောင့်နှေးသည့်အကွာအဝေးသည် ၃-၈ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ တူညီသောရေဖိအားညှိနှိုင်းမှုအောက်တွင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္The ာန် ပိုကြီးသော လက် Operat Urinal Flush Valve...
Time Delay Brass Urinal Valve သည် flush valves များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေရရှိရန် ၆ နာရီမှ ၈ စက္ကန့်ကိုရေတက်အောင်အလိုအလျောက်ပိတ်နိုင်သည်။ Push Button Urinal Flush Valve သည်ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Chrome လည်းဖြစ်သည်။ Exposed type flush valve သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ပြီးလည်ပတ်နိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.05MPa မှ...
အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်: အချိန်နောက်ကျနေသော Urinal flush အဆို့ရှင်သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့် အရွယ်အစား: DN15 မျှော်လင့်ပါတယ် စျေး: မူရင်းစက်ရုံစျေးနှုန်း အသုံးပြုမှု: နံရံပေါ်က urush flush valve ကိုချိတ်ထားတယ် MOQ: 200pcs အင်္ဂါရပ်များ...
Urinal အတွက်စီးပွားဖြစ် Flushometer Valve သည်အချိန်ကိုထိန်းချုပ်သော flush valves များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေရရှိရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ၃ မှ ၈ စက္ကန့်အထိဖန်း။ မိမိကိုယ်ကိုပိတ်နိုင်သည်။ ခလုတ်ကို Flush Valve ကိုနှိပ်ပါ သံမဏိသွပ်သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ နံရံတွင်တပ်ထားသော urinal flush valve သည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။...
မြင့်မားသောအရည်အသွေးသောကြေးဝါလက်ဖြင့်ဖိထားသည့် Urinal Flush Valve Hand Pressed Urinal Flush Valve ၏ Handy ၏မြင့်မားသော purityNo ကိုရွေးချယ်သည်။ ၅၉ ကြေးဝါ၊ သတ္တုစပ် (သို့) ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့သောယုတ်ညံ့သည့်ပစ္စည်း မဟုတ်ပါ ။ မြင့်မားသောအပူချိန်အပူပြီးနောက်, ဆွဲငင်အားသေ - သွန်း များပြားသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့်...
လက်ဆေး Push Urinal Flush Valve Toilet Flush valves ။ ပြည်သူ့အိမ်သာ Flush Valves များ သုံးရန်အဆင်ပြေသည်၊ ရေချွေတာသောကိရိယာများ sefl ပိတ်ဆို့ရှင် ၃-၈ စက္ကန့် အထိရေနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်သည်။ တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သဘာဝကိုယ်နှိုက်ကခိုင်မာပြီးတာရှည်ခံမှုကို ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆွဲငင်အားကို...
အလိုအလျောက် inductive ဆီး Flush Valve အာရုံခံကိရိယာ၏ flush အဆို့ရှင် ၊ နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားပြီး၊ လူတွေဒီအာရုံခံကိရိယာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါဒီထုတ်ကုန်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ ၅၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးမှာတပ်ဆင်ထားသည်။ သူက detector induction ကိုလက်ခံသည်။ အဓိကကျသောကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကြေးဝါသည်ပွတ်တိုက်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခရုမ်း သုတ်ဆေး...
တရုတ်နိုင်ငံ Urinal Flush Valve ပေးသွင်း
Urinal flush အဆို့ရှင်ကိုကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး chrome ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေကိုဖိ။ အချိန် ၆ မှ ၈ စက္ကန့်နောက်ကျပြီးနောက်အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ။ အများသုံးသန့်စင်ခန်းတွင်ဆီးသွားခြင်းကိုခံနိုင်သည်။ Exposed type flush valve သည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ပြီးလည်ပတ်နိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်ဖိအား 0.05MPa မှ 0.9MPa ဖြစ်သင့်သည်။
ထိတွေ့ဆီး Flush Valve
ဖုံးကွယ် urinal flush Valve
ထိတွေ့အိမ်သာ flush Valve